“यी ४ राशि भएका युवतीले,पारिदिन्छन् जस्तोसुकै युवालाई पनि फिदा” – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“हरेक मानिसमा आ–आफ्नै किसिमको शौन्दर्यता एवं अरुलाई आकर्षण गर्ने गुण हुन्छ । केही यस्ता पनि युवति हुन्छन्, जो आफ्नो सुन्दरता बिना नै अरुलाई आफु तिर आकर्षण गर्न सकछन् । यिनीहरु स्वयमले भन्दा पनि यिनीहरुको राशीले गर्दा यिनहिरुतिर जस्तो सुकै पुरुष पनि आर्कषित हुने गर्दछन् ।
१२ राशिमध्ये यी ४ राशि भएका महिलाहरुमा जस्तोसुकै पुरुषलाई आकर्षित गर्न सक्छन्ः”
“वृष राशिः वृष राशि भएका युवतीहरुको गन्ती सुन्दर देवीसँग हुन्छ । उनीहरुसँग अरु व्यक्तिमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने गुण हुन्छ । साथै उनीहरुले भनेका कुरा पुरुषहरु निकै सजिलै मान्ने र पूरा गर्ने गर्दछन् ।”
“वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशि भएका युवतीहरुसँग कसैलाई पनि आकर्षित गर्ने शक्ति हुन्छ । उनीहरुको अनुहार र आँखामा एक प्रकारको सम्मोहन हुन्छ । त्यसकारण जसले पनि उनीहरुलाई हेर्छन् उनीहरु मोहित हुन्छन् ।”
“मीन राशिः मीन राशि भएका युवतीहरु रोमान्टिक हुन्छन् । पुरुषहरु उनीहरुको प्रेममा निकै सजिलै पर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो मिठो कुराले चाँडै नै पुरुषलाई आकर्षित गरिहाल्छन् ।”
“मिथुन राशिः मिथुन राशि भएका महिलाहरुको तुलना अप्सरासँग गरिन्छ । जसले जस्तोसुकै पुरुषलाई पनि आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरताबाहेक यी राशि भएका युवतीमा यस्ता थुप्रै गुण हुन्छ जसले पुरुषलाई आकर्षित गर्छन् । उनीहसँग धेरै उमेरसम्म जवान देखिने क्षमता पनि हुन्छ ।”
“यी राशि भएका महिलाहरुले पुरुषलाई आफ्नो बसमा पार्न सक्छन् । चाहे ती महिलाहरु गलत नै किन नहोऊन् उनीहरुलाई पुरुषहरुले कहिल्यै पनि गलत भन्नै सक्दैनन् ।”
Previous “सलमान खान सन् १९९० का दशकमा, नेपाल आएका थिए, राजा विरेन्द्र शाहको छोरी श्रुति राज्यलक्ष्मी शाह पनि सलमानको फ्यान थिइन् …”
Next “गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा, किन आउँछ, प्रधानमन्त्री देउवा,को नाम ?
कुन हो पुर्व युवराज पारसले चलाउने बाइक, कति पर्ला नेपालमा यसको मूल्य ?
“बिश्व नै चकित, पारे सबैलाई,अचम्ममा पारेर,टुप्पीले कार घिसार्ने,चितवनका, गोर्खे दाइ, हेर्नुहोस!(भिडियोसहित)
“प्लेन माथि पलेटी मारेर, बसिन् नायिका, प्रियंका चोपडा फोटो भयो एकै, छिनमा भाइरल”